Home Falanqeynta Kulamada Falanqeynta Kulanka Manchester City Vs Crystal Palace ee Horyaalka Premier League
Kooxda Manchester City oo ku jirtaa mid kamid ah waqtiyadiidii ugu fiicnaa marka la eego kulamadii ugu danbeeyay ayaa garoonkeeda ku soo dhaweeneysa kooxda Crystal Palace kulan ka tirsan Horyaalka Ingariiska.
Kulanka Manchester City vs Crystal Palace
Garsooraha Ciyaarta Lee Mason (England)
Manchester City ayaa wali waxaa ka maqnaanaya daafacyada kala ah Nathan Ake iyo Aymeric Laporte.
Sergio Aguero sidoo kale wali lama heli karo madaama uu iskarantiilay laakiin Eric Garcia ayaa laga yaabaa inuu ku lug yeesho kulankan.
Crystal Palace ayaa qiimeyneysa kooxdeeda ka dib barbarihii goolal la’aanta ee ay la galeen Arsenal khamiistii, iyadoo daafaca taam ahaanshiyaha leh ee James Tomkins uu muhiim ka yahay kulankaan.
Mamadou Sakho ayaa weli ku sii maqnaan doona dhaawac bowdada ah, halka Martin Kelly uu weli maqan yahay.
Manchester City ayaa badisay 7 ka mid ah 10-kii kulan ee ugu dambeeyay ee ay ciyaartay horyaalka, laba bar-baro iyo hal guuldaro.
Si kastaba ha noqotee, City ayaan wax guul ah gaarin labadii kulan ee ugu danbeysay ee ay garoonkooda kula ciyaareen Palace – Pep Guardiola waligiis ma uusan gaarin seddex kulan oo isku xigta oo horyaalka ah isagoo aan ka badinin isla koox ka soo horjeeda xirfadiisa ciyaareed.
Lixdii kulan ee ugu dambeysay oo ay labadaan koox ku kulmaan Etihad Stadium waxaa laga dhaliyay 26 gool.
Previous articleChelsea oo guul ka gaartay Fulham kulan ka tirsan Horyaalka Premier league
Next articleFalanqeynta Kulanka Liverpool Vs Manchester United ee Horyaalka Premier Leauge ugu xiisaha badan